Tirada dadka laga helay feyruska Corona oo hadana mar kale kor u kaceyso. - NorSom News
Home Covid-19 Tirada dadka laga helay feyruska Corona oo hadana mar kale kor u...
Tirada dadka laga helay feyruska Corona oo hadana mar kale kor u kaceyso.
24-tii saac ee ugu danbeysay, waxaa dalkan Norway feyruska Corona laga helay 240 qof, tiradaas oo muujineyso inay kor u kaceyso tirada dadka laga helayo feyruska Corona.
Isbuucii ugu danbeeyay, waxaa isku cel-celis maalin walba xanuunka corona laga helay 312 qof.
Magaalada Oslo ayaa ah meesha ugu badan ee ilaa hada laga dareemayo kor u kacaas xooga ku socdo ee laga dareemayo Norway.
ilaa hada waxaa laga soo bilaabo Maarso 2020 gudaha Norway feyruska Corona u geeriyooday 800 qof. Halka xiligan ay isbitaalada xanuunkaas u jiigaan 17 qof oo xanuunkaas uu soo ritay.
Xigasho/kilde: Smitten opp over 50 prosent den siste uken
Previous articleSp: Goboladan la isku daray, ayaan rabnaa inaan sidii hore ku celino.
Next articleWaa soomaali, balse iyaga oo dalalkan matalaya ayay ciyaaraha Olimbikada ka ordayaan.